Biogas waxaa laga soo saaraa haraaga dhirta soo hara | Cusbooneysiinta Cagaaran
Maanta waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo soo saaro tamar iyada oo loo marayo qashinka noocyadiisa kala duwan. Isticmaalka qashinka sida ilaha si loo soo saaro tamar waa hab fiican oo lagu keydin karo alaabta ceyriinka ah iyo in laga caawiyo joojinta ku tiirsanaanta shidaalka.
Gabbaldayaha reer Mexico waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay geed duulaan ku ah aagag kala duwan oo Afrika ah, Australia, iyo jasiirado kale oo ku yaal Badweynta Baasifigga. Hagaag, cilmi baarayaal ka socda laba jaamacadood oo reer Nigeria ah ayaa ka shaqeynayay daraasad dhiirrigelinaysa wax soo saarka gaaska noolaha iyo waxtarka ka soo baxa saxarada beeraha digaaga iyo gabbaldayaha gabbaldayaha.
1 Abuur gaaska noolaha oo kordhi waxtarka
2 Waxtarka weyn ee daaweynta hore
Abuur gaaska noolaha oo kordhi waxtarka
Ka soo saarista gaaska noolaha wasakhda digaagga iyo gabbaldayaha reer Mexico waa fikrad aad u fiican, maaddaama oo aynu ku dhammaano laba dhibaato oo waaweyn: daaweynta haraaga beeraha iyo halista noocyada asaliga ah ee uu sababo gabbaldayaha reer Mexico. Markii hore, labadaba Nigeria iyo Shiinaha, cilmi baaris ayaa la sameeyay si looga faa'iideysto gaaska noolaha. Fikradda ayaa ah in laga takhaluso duulaanka dhirta ee meelaha ay ku barakaceyso dhirta ubaxyada tan iyo markii labadaba cilmi baarayaasha jaamacadda iyo IUCN (International Union for Conservation of Nature) koox khaas ah oo ku saabsan noocyada duullaanka ay tilmaamayaan in gabbaldayaha qorraxda ay yihiin kuwo qatar ku ah qaar la ilaaliyo. meelaha dabiiciga ah.
Nayjeeriya waa mid ka mid ah waddamada uu dhirtan dhirtu aad ugu badan yahay waana taas sababta ay u joojin waayaan raadinta beddello ay ku joojiyaan ballaarintiisa. Intaas waxaa sii dheer, iskama dayayaan oo keliya inay joojiyaan warshaddan laakiin sidoo kale waxay isku dayaan inay ka faa'iideystaan ​​qashinkeeda. Daraasaddan oo ay sameeyeen jaamacadaha Landmark iyo Covenant, oo lagu daabacay joornaalka Tamarta & Shidaalka, waxay muujinaysaa in hadhaaga ubaxyo-qoraxeedkan ay leeyihiin wax-ku-ool weyn xagga soo-saarka biogas-ka. Tani waxay dhacdaa iyada oo ay ugu mahadcelineyso wada-shiididda qoraxda reer Mexico iyo hadhaaga beeraha digaagga oo leh daaweyn hore.
Waxtarka weyn ee daaweynta hore
Waxaa jira siyaabo badan oo loo soo saaro gaaska noolaha. Biogas waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro tamar maadaama ay leedahay qiimo aad u sarreeya. Daraasadu waxay baaritaan ku samaysay daaweyn hore ee haraaga digaaga iyo hadhaaga gabbaldayaha reer Mexico kordhinta waxsoosaarka wax soo saarka gaaska noolaha oo ka badan 50%. Gabagabada daraasadu waxay muujisay koror ah 54,44% ee soosaarka biogas ee ka yimid tijaabo ah in daaweyn horudhac ah la sameeyay lana barbardhigay wixii aan horay loo daweyn.
Si loo ogaado haddii waxtarka uu daboolayo tamarta loo isticmaalay daaweynta ka hor, dheelitirka tamarta ayaa la sameeyaa. Isu dheellitirka tamarta, tamarta gelaysa nidaamka ayaa la darsaa, iyo sidoo kale tan lagama maarmaanka u ah dhammaan howlaha soo saarista gaaska, iyo sidoo kale tamarta ka baxda nidaamka. Sidan oo kale, waxaad awood buuxda ku leedahay wax soo saarka iyo isticmaalka tamarta waqti kasta.
Waa hagaag, isku dheelitirka tamarta ee la fuliyay, waxaa lagu arkay taas tamarta saafiga ahayd mid togan iyo ku filan in si ku filan loogu magdhabo tamarta kuleylka iyo korontada ee loo isticmaalo daaweynta pre-thermo-alkaline.
Maskaxda ku hay in haraaga digaagga ay ku jiri karaan nafaqooyinka, hormoonnada, antibiyootikada iyo biraha culus kuwaas oo lagu qasi jiray carrada iyo biyaha. Waxaas oo dhami way sumoobi karaan carrada iyo biyaha halka laga soo saaray. Taasi waa sababta adeegsiga saxaradan loogu talagalay soosaarida gaaska noolaha ay gabi ahaanba qiil u leedahay, in kasta oo la xusay in iyaga laftoodu aysan faa'iido aheyn in loo beddelo gaas noolaha. Si ay waxtar badan u yeeshaan, waa in lagu qasaa waxyaabaha ceyriinka ah ee khudradda sida gabbaldayaha Mexico.
Ugu dambeyntiina, waxaa kale oo jira dhir kale oo duulaan ku ah dalal kale sida Mexico ama Taiwan halkaas oo ay qorsheynayaan inay u beddelaan biofuels sida ethanol oo sidoo kale loo isticmaalo in lagu barto isticmaalka biomethane.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Biofuels » Biogas » Biogas waxaa laga soo saaraa haraaga dhirta soo hara
Tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee Yurub sidee tahay?